मन्त्री सोमनाथ पौड्यालले भने- जैविक लडाईं जनताले लड्नुपर्छ - खबरम्यागजिन
मन्त्री सोमनाथ पौड्यालले भने- जैविक लडाईं जनताले लड्नुपर्छ
January 10, 2018 January 10, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि
पश्चिम जिल्लाका कृषकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा आज कृषि एवं बागबानी विभागका मन्त्री सोमनाथ पौड्यालले सोरेङ-च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रका कृषकहरूसँग भेट गरे। आज थर्पूको सुब्बा सार्वजनिक भवनको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक तथा शिक्षा विभागका मन्त्री आरबी सुब्बा विशिष्ठ अतिथि थिए।
अन्तरक्रियामा कृषकहरूले विभागसमक्ष पानी, जङ्गली जनवरलगायत विभिन्न समस्याहरूको कुरा राखे। यसको प्रत्युत्तरमा मन्त्री पौड्यालले जनवरहरूको विषयमा मुख्यमन्त्रीसम्मले पनि सम्बन्धित विभागलाई जङ्गली जनवर नियन्त्रणको निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले पानीको समस्यालाई समाधान गर्ने विभागमा धेरै योजनाहरू रहेको अनि उक्त योजनाहरूबाट पानीको समस्यालाई समाधान गरिने आश्वासन दिएका छन्। उनले कृषकहरूको मागलाई पूरा गर्न सरकार लागिपरेको बताए।
कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको बाहुलिबाट लाभार्थीहरूलाई कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सामाग्रीहरूको टोकन वितरण गरियो। जसमा 10 जनाई पोल्ट्री, पाँच जनालाई सुँगुरको बच्चा, पाँच जनालाई लो कष्ट ग्रीन हाउस अनि एकजनालाई पावर टिलर प्रदान गरियो।
यस अवसरमा पश्चिम जिल्ला जिल्ला पञ्चायत अध्यक्ष देविका सुब्बा, कृषि एवं बागबानी विकास बोर्डकी अध्यक्ष पद्मा शंकर, सिक्किम युवा विकास बोर्डका अध्यक्ष खेमप्रसाद दाहाल, स्वास्थ्य विभागका सल्लाहकार डा. एडी सुब्बा, कृषि विभागका सल्लाहकार जेबी सुब्बा, विभागका उप निर्देशक सोरेङ महकुमा एके शर्मा स्थानीय ग्राम पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायतगणलगायत स्थानीय कृषकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मन्त्री पौड्यालको सम्बोधन अंश
देश र राज्यलाई अघि बढाउन कृषकहरूको ठूलो जिम्मेवारी छ। जैविक लडाईँ लड्न सरकारले नीति तयार गरेको छ, त्यसै नीति अनुरूप जनताले जैविक लडाई लड्नुपर्छ। कृषकहरूमाथि जवारको अतिक्रमण बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीले पनि योजना बनाउने निर्देश दिएका छन्। अहिले कृषकहरूलाई हरेक कुराले सताउँदैछ, भरतमा सबैभन्दा धेर मधुमेहका बिरामीहरू पाइएका छन भने सिक्किममा रक्तचापका रोगीहरू धेर छन्। ग्रामीण स्तरका जनताको उद्धार नभए सिक्किमको उद्धार हुँदैन।
मन्त्रीले, जनसंख्या धेर भएको देश चीनले विश्व पपिटेको छ। हामीले पौरखबाट आफ्नो ख्याती कमाउनुपर्छ। सबैले सिक्किम आउन रुचाउने बनाउनुपर्छ। सिक्किम जैविक राज्य भएको कारण यहाँ सिलगडी, धूपगढी तिरबाट खाद्यान्न ल्याएर बेच्नुहुँदैन। मुख्यमन्त्रीको सोच प्रत्येक जनताको आङमा घाम लाग्नुपर्छ भन्ने छ। कृषकहरूको पसिनाबाट मिडमलम्यानले मात्र कमाएको छ। गोबर नसोरी दुध खान खोज्नेहरूले कृषकहरूको उत्पादनको फायदा उठाउँदैछन्। कृषक निमुखा भएर हेपिएका छन् त्यसैले सरकारले अब मिडलम्यान हटाएर सोझै कृषकहरूलाई बेच बिखानको निम्ति प्रोत्साहित गर्दैछ।
सिक्किमेले सिक्किमलाई माया गर्ने नेतृत्व पाएको छ। सबै विकसित देशहरू राम्रो नेताको नेतृत्वले विकसित भएका हुन्। प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई सपना दिनसक्नुपर्छ अनि मात्र समाज अघि बढ्छ। सरकारले किसानहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा काम गर्दैछ। जनप्रतिनिधिहरूले यसमा सरकारलाई सहयेग पुऱ्याउनुपर्छ।
थर्पुका जनतालाई पानीको समस्याको निम्ति कुलोको निर्माण अनि पुरानो कुलोलाई जीर्णोद्धार गरिनेछ। थर्पुमा दुईवटासम्म कलेक्न सेण्टरको निर्माण गरिने छ। जसरी दुध डायरीमा प्रतिदिन दुध पुऱ्याइन्छ त्यसरीनै प्रतिदिन साग-सब्जी कलेक्सन सेण्टरमा पुऱ्याउने काम गर्नुपर्छ। प्रगतिशील कृषकहरूलाई गाई प्रदान गरिनेछ। जैविक खेतीको निम्ति गाईको मल प्रोयग गर्नुपर्छ। गाईको संख्या बढाउन सरकारले बाहिरबाट भएपनि गाई किनेर ल्याउने गरेको छ। अहिलेसम्म कूल 15 सय जति गाई अनि बाछिहरू बाँढिएको छ।
सप्लिमेण्ट्रीमा छुट्याइएको बजेटले जनताका बुनियाँदी सुविधा पूरा गरिनेछ। गुपछुपमा बाहिरबाट प्रतिबन्धित दवाईहरू ल्याएर प्रयोग गरेको कुरा अझ चल्दैछ। यस्तो गैर कानुनी कार्य गरे उसलाई कानुनी कारवाही गरिनेछ। यसमा दयामाया कसैले गर्नेछैन। जनतालाई सरकारले यत्रो सुविधा उपलब्ध गराएको छ यसको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। जनताले सरकारको सोच र अभियानलाई मार्नु हुँदैन। प्रजातन्त्रमा जनता सबै बाठो हुनुपर्छ। ठिक अनि बेठिक कुरा छुट्याउने क्षमता राख्नुपर्छ। बाहिर राज्यको उदाहरण लिएर यहाँको शान्ति व्यवस्थाको कदर गर्नुपर्छ। हामीले भएको कुरालाई छोडेर नभएको कुरा चिताउँदैछौं। राम्रो काम गर्ने अनि राम्रो कामको कदर गर्नुपर्छ।
संसार दिमागले चल्दैछ। विश्वका धनी मानिसहरूले संसार चलाउँदा ब्याङ्कलाई प्रयोग गरेका हुन्छन्। दिमाग र पैसा छ भने संसार चलाउन सकिन्छ। अमेरिकाले क्यूवामा पेट्रोल प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कृषिमा प्रयोग गरिने दवाईहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर त्यहाँका क्रान्तिकारी नेता फिदोल कास्त्रोले साइकल चलाएर अनि जैविक खेतीको आरम्भ गरेर आफ्नो देशको विकास गरेका थिए। सिक्किमलाई पनि बाहिरबाट आउने दवाई, विषाक्त उत्पादनको जरुरत छैन। सिक्किमले राजनैतिक नेतृत्व राम्रो पाएको छ त्यसैले हामी पनि सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छौं।
हर्दी, अदुवा, अलैंचीको बाजारिकरणको निम्ति पताञ्जलीसँग सरकारले मिलेर काम गर्ने छ।
17 जनवरी उत्तर अनि पूर्व जिल्लाका कृषकहरू र 18 जनवरी पश्चिम अनि दक्षिण जिल्लाका कृषकहरूलाई जैविक दिवसमा निम्त्याइएको छ। रोगीहरूको स्वास्थ्यमा पनि जैविक खाद्यान्नले ठिक गर्नेछ। युवाहरूलाई कृषि एवं पशुपालनसँग जोडिएर स्टार्टअप सिक्किम योजना अन्तर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडीमा लोन प्रदान गरिनेछ।
अब जैविक उत्पादन बढाए कृषकहरूकोमा मानिसहरूको लाइन लाग्ने छ। कृषकले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। गाई, ग्रीन हाउस, गाई इत्यादी सहुलियतहरू बाँढिने छ। कृषकहरूले केरा, मेवा, आँपको उत्पादन बढाउन जोर दिनुपर्नेछ। विभागीय अधिकारीहरूलाई बीऊ बिजन समयमा पुऱ्याउने निर्देश दिइएको छ। कृषकहरूको निम्ति सपोर्टिङ प्राइज प्रदान गरिने छ। जैविक उत्पादन साथै डायरी फार्मिङमा पनि काम गर्नुहोस्। 31 मार्चदेखि बाहिरको सब्जी आयात बन्द भएको कुरामा कृषकहरू खूशी छन्।
कृषकहरू खेतीको निम्ति आफै जागरुक भएका छन्। शिक्षित युवाहरूले सब्जीलाई पनि अनलाईन बेच्न सक्नुपर्छ। जैविक उत्पादननको निम्ति मुख्यमन्त्री, विभाग अनि जनता जुन जोशमा छन् त्यो जोशलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सिक्कममा प्रजातन्त्रको सदुपयोग भएको छ।
1973-वर्ष देखिको राजनैतिक अनुभव अनुसार जनतामा एसडीएफ अनि पवन चामलिङको नेतृत्वको लोकप्रियता देख्दा आउँदो विधानसभा चुनाऊ पनि एसडीएफ पार्टीले निर्धक्क जित्न सक्ने लागेको छ। पहिले विपक्षमा बसेर राजनीति गर्नेले बास बस्ने ठाउँ पाउँदैन थिए। कुनै अन्य पार्टीको सभामा गए घरमा बिदा मागेर आइस? भन्दै धम्क्याइन्थ्यो। अहिले भने सिक्किमे जनताले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएका छन्। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको योजनामा सहयोग पुऱ्य़ाउनुहोस्।
मन्त्री आरबी सुब्बाको सम्बोधन अंश
सरकारले बाहिरबाट आउने सब्जी बन्द गर्नु कृषकहरूको भलाईको निम्ति गरिएको हो। राज्यका कृषकहरूको निम्ति सरकारले धेरै योजनाहरू बनाएको छ। कृषकवर्गले आफ्नो लागनी अनुसारको दाम नपाएको कारण सरकराले यहाँ धेरै मात्रामा उत्पादन हुने सामाग्रीहरू राम्रो दाममा बाहिर जानेछ। फापर, रायो अनि तोरीको सागको पनि मूल्य बढेर जानेछ। कृषकहरू उत्पादन बढाउन तयार रहनुपर्छ। पानीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार अनि विभाग लागिपरेको छ। पाइप, ट्याङ्की विभागले उपलब्ध गराउनेछ। कृषकहरूको निम्ति कलेक्सन सेण्टर खोलिनेछ।
त्यहाँ गाउँका प्रत्येक कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन पुऱ्याउनुपर्नेछ। सरकारले सब्जी एकत्रित गर्न वाहन उपलब्ध गराएको छ। एकपल्टमा त्यस वाहनले सातसय केजी सम्म बोक्न सक्नेछ। राज्यका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले जैविकको क्षेत्रमा विश्वलाई नेतृत्व गर्दैछ। अब जनताले जैविक उत्पादनको फायदाको सपना देख्नुपर्छ। मन्त्री सुब्बाले ग्राम पञ्चायत सदस्यगणलाई आफ्ना वार्डका जनतालाई परिवारका सदस्यको रूपमा रहेर काम गर्ने अपील गर्छु।
बङ्गालबाट अहिले धेरै सागसब्जीहरू आउने गरेका छन्। हामीले बजारबाट किनेर ल्याउने संस्कृतिलाई त्याग्नुपर्छ। सिक्किमेले यहाँको उत्पादन र बाहिरबाट आएको साग-सब्जीको स्वादमा तुलना गर्नुपर्छ। मन्त्रीले कृषकहरूलाई लागिपरेर उत्पादन बढाएमात्र जैविक खेतीबाट सोचेजस्तो फायदा उठाउन सक्नेछ।